Kunezinhlobo ezimbili zama-izingqimba: kanye kuhhavini futhi njengoba idivayisi ehlukile. Sezadlula lezo nsuku lapho amapuleti waba ukusebenza zazingavumi kahle futhi bengenalo awasetshenziswa. amapuleti Modern can cishe yonke into kusuka bayobhaka kuya izoso kuphekeke. Ngaphezu kwalokho, izitofu yesimanje isethi ezahlukene izici ezingase ukwanelisa kokubili labapheki professional namakhosikazi. Ukuze uqale, ake ukubhekana ngezigaba.
Ngaphezu kwalokho, ukuthi ipuleti kungafaka noma akuhlanganisi kuhhavini, kukhona amapuleti Ohhavini ezinhlobo ezehlukene: igesi noma kagesi. okungukuthi kuvela ukuthi ezahlukeneyo zingenzeka:
- isitofu igesi nge kuhhavini igesi;
- a cooker igesi nge eziko;
- cooker kagesi nge eziko.
Cabanga izinzuzo usebenzisa igesi noma ugesi. Negesi - uphethiloli ukuthi has a izindleko iphansana, ngokungafani ugesi. A option enkulu, uma indlu ixhunywe igesi supply emaphakathi. Negesi isitofu nge hob igesi aludingi ukuxhumana olwengeziwe (ngesimo ugesi), okuyinto wenza kube lula inhlangano zedivayisi. Negesi Ukushisa - ngaphezulu okusheshayo, isb Kudinga isikhathi esincane ukupheka. Uma sicabangela nemibi, bungokulandelayo:
- kunzima ukulawula izinga lokushisa;
- umlilo evulekile;
- yinkimbinkimbi ukusebenza.
Uma ungakwazi ukunquma ukuthi yikuphi okulungile ngawe: igesi cooker nge gas hob, kuhhavini kagesi nge kagesi noma okunye - igesi hob futhi kuhhavini kagesi, kubalulekile ukubheka izinzuzo nezingozi amadivayisi kagesi. izinzuzo:
- ukutholakala kukagesi;
- ukunemba ukulungisa komlilo;
- kalula nesondlo;
- ophoqelelwe ukupholisa;
- izici Isofthiwe engeziwe.
- Dynamics kancane Ukushisa.
Ngaphezu ukuba khona noma ukungabi kuhhavini, kukhethwa amapuleti kuyadingeka ukuba banake ubukhulu, umbala, kuhhavini ukujula, inani izitofu kanye isimo sabo, khona ezahlukene yokusebenza izindlela, izici ezithuthukile. Ukuze emakhishini ezincane kukho ezinhle igesi isitofu isitofu double nge kuhhavini. Ukuze emakhishini ivulekile isixazululo omuhle kungaba isitofu sokupheka nge izitofu ezine futhi kuhhavini ehlukile. Ekugcineni, konke kuza Decor yakho - kwembala, ubungako kanye nokuhlukana.
Ngakho lokho kuyinto esishubile igesi nge kuhhavini ezinhle? Uma kukhethwa ezimbili ongakhetha, okungcono kuyoba kuhhavini kagesi. Ukupheka kuhhavini ngokuvamile inqubo ngempela obucayi ngenxa lokushisa eliphezulu futhi aphansi imaging ukulungiselela inqubo. Ukuhleleka okuhle mode, self-timer noma ngaphandle kwe-nika amandla ukupheka lula kakhudlwana. Negesi Ohhavini futhi abe timer, kodwa akudingeki othomathikhi livaleke-off.
Jwayelekile igesi isitofu zanamuhla nazo kuhhavini igesi linokulawula igesi okuthiwa yi-esiphezulu kanye ukuthungela kagesi. Abanye abakhiqizi ukufaka ipuleti lakho yesondlo othomathikhi lomlilo ukupholisa ngenkani (kuhhavini). Electric kuhhavini hlupha ungaba umsebenzi ngezinye izikhathi idlule igesi hlupha. Ngaphezu kwalokho, kuyinto esivela isilawuli emihle komlilo ngenxa ukukhishwa lokushisa ewashini, kanye nokulawula eyisibonelo heater kunikeza amathuba amaningi.
Suschetvuet emakethe kukhona izinkampani eziningi wahlanganyela emsebenzini wokukhiqiza igesi izitofu kanye kuhhavini. Abakhokheli uncamela abathengi kuyinto: AEG, Bosch, Kaiser. Yiqiniso, lena akuyona imodeli eshibhe, kodwa babe nokwethenjelwa eliphezulu nokusebenza kakhulu.
Uma ebeka nje ekhishini noma kabusha isikhala ekhishini, kuyilapho okungcono iyohlukanisa hob kuhovini sobumba. Ukuthenga lezi amadivaysi eceleni, uthola amathuluzi tekusebentisa enemisebenzi emkhakheni.
Indlela ukukhetha uhlobo ushizi?